आफू भ्रष्टाचार नसहने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको रुपमा पेश गर्दै सञ्जेलले, प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै चुनौति
बिराटनगर । श्रम कार्यालय बिराटनगरका उपसचिव प्रेम सञ्जेल एकाएक सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बने । आफूलाई गलत तरिकाले सरुवा गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि सञ्जेलको चर्चा चुलिएको हो ।
समाचारदातासँगको कुराकानीमा सञ्जेलले भने, ‘मेरो सरुवा गैरकानूनी छ । एक, दुई, तीन यो कार्यालय छाड्दिनँ ।’
आखिर को हुन् त उपसचिव प्रेम सञ्जेल ? निजामति सेवामा उनको ४० वर्षे अनुभूति कस्तो छ ? यसबारेमा समाचारदाताले सञ्जेलसँग कुराकानी गरेको छ ।
त्यतिबेला कार्यालयका कर्मचारीले बुबासँग दुईसय रुपैयाँ घुस मागे । जब कि हामीले पास गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य नै तीन सय पनि थिएन होला । मेरा बुवा मालपोत कार्यालयमै धुरुधुरु रुनुभयो । त्यो देखेर मैले नै बुबालाई सुझाएँ, ‘अलिकति पैसा दिएर भए पनि जग्गा पास गरौँ ।’
पछि बुवाले मलाई भन्नुभयो, ‘तँ पनि पढेर कर्मचारी बन्लास्, पैसा कमाउलास् । त्यतिबेला तेरो बालाई जस्तो अरुलाई नरुवाएसे ।’
पत्रकार सम्मेलन अघि र पछि
भ्रष्टाचार गर्नेहरुको नाम कुकाठको रुखमा टाँसेर उसलाई ‘अन द स्पट’ जागिरबाट निकाला गर्नुपर्छ । मिडियामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ जागिरबाट निकालिने कुरा निजामति ऐनमै लेखिनुपर्छ र राष्ट्रसेवकले आफ्नो इज्जत, योग्यता, कमाई, क्षमताभन्दा उपल्लो स्तरको आर्थिक हैसियत प्रदर्शन गरेमा अख्तियारले उसलाई तत्काल जेल हाल्नुपर्छ । र, त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ ।